ဘာသာကိုးကွယ်တာနှင့် ဘာသာကာကွယ်တာမတူပါ။ စာရေးသူ- ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Aung San Suu Kyi » ဘာသာကိုးကွယ်တာနှင့် ဘာသာကာကွယ်တာမတူပါ။ စာရေးသူ- ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
ဘာသာကိုးကွယ်တာနှင့် ဘာသာကာကွယ်တာမတူပါ။ စာရေးသူ- ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
http://bokyawnyein.blogspot.co.uk/ Bo K Nyein
At the airport with media — in Rangoon.
Tags: 1990 election, 2008 constitution, Aung San Suu Kyi, bdcburma, Bogyoke Aung San, Burma, burma crisis, burma democracy burma democracy movements, burma.aung san suu kyi, News Music Life Rubble Politics Family Photography Travel Art Personal Food Religion Christmas Holidays Movies Poetry Random Books Culture Love Thoughts Writing Photos Fashion Video Friends Events Vid
By Burma Democratic Concern (BDC) in Aung San Suu Kyi on 05/05/2013 .
← သမ္မတ နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ ၁၈ ပါတီတွေ့ဆုံပွဲမှ မှတ်တမ်းရသလောက် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်သူ နေမျိုးဝေ ဥ က္ကဌ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်း ချမ်းရေးပါတီ	President U Thein Sein’s Remark on the Report of the Rakhine Investigation Commission →